Abune Pheexiroos (Magarsa Badhaasa) Eenyu Ture? Dhuguma innii Oromoo dha?Via www.xalayaa.com – Chala Dandessa Debela
Abune Pheexiroos (Magarsa Badhaasa) Eenyu Ture? Dhuguma innii Oromoo dha?Via www.xalayaa.com
Date: July 8, 2017Author: Chala Dandessa Debela 0 Comments
Bara 1875 Fichee Salaaletti maatii qote bulaa irraa dhalatan. Warri isaanii irraa dhalatanis gama abbaatiin warra Badhaasaa Guddaa jedhaman gama haadhaatiin ammoo warra Jaalee Masoo jedhamu. Maqaan isaanii jalqabaa Magarsaa akka ta’e himama. Ijoollummaadhanis gara kawaala Debre-Libaanos deemuudhaan baruumsa amantaa yeroo gabaabaa keessatti haala nama dinqisiisuun xumuruu danda’anu. Sana boodas yeroo sanatti iddoo hayyootni amantaa jiru gara kaaba Itoophiyaa, Gondar, akkasumas Gojjam fi Walloo deemuudhaan baruumsa afuurawaa qo’atanii turan. Bara 1900, Walloo iddoo Amaara Saayintitti waggoota sagaliif barsiisa nama turanii dha. Bara 1909 ttis sirni moloksummaa kawaala Dabra-Libaanositti raawwatameefi ture. Kawaalaa Gabr’ieelii Baatuu(Zuwaay) dabalatee iddoo gara garaatti naanna’anii barsiisa turan.
Godina Arsii Aanaa Zuwaay(Baatuu) Dugdaa Hora Danbal irratti kan argamtu godaambaa afuurawaa Debre Tsiyoonitti/Tullu Guddootti/ wangeelli isaan harkaan barreessan uffanni isaan uffataniifi Masqaliin isaan qabatachaa turan ammayyuu ni jira. Tullu Guddoon bara mootuu Yoodit Tabotni Tsiyoon waggaa 40 iddoo itti dhokattedha. Bara 1919 ammoo gara Finfinnee dhufuudhaan bataskaana Maarqoositti tajaajilaniiru. Phaaphaasota Itiyoophiyaadhaa bara 1921 yeroo jalqabaaf gara Masrii, Aleksaandariyaatti ergamanii muudaman keessaa tokko turan. Bara 1928 yemmuu Xaaliyaanin biyya keenya gabroomfachuuf manneen kiristaanaa gubaa, namoota ajjeesa turanitti qabsaa’ota mirgaa kadhannaadhaan gargaaraa turan.
Reeffa isaanis namni akka hin agarreef Finfinneedhaa baasanii bakka namni hin agarretti awwaalan Xaaliyaanonni. Ummati Finfinnees guyyaa sana guutummaan boo’afii oole. Siidaan yaadannootis bara 1938 Finfinneetti iddoo isaan wareegamanitti dhaabteef. Manni amantaa ortoodoksi bara Paatiriyaarikii Shanaffaa Abune Phaawuloos, waggoota 60 booda wareegamaa Abune Pheexirosiif aangoo qulqullummaa laatte. Jaarraa si’anaa kana keessas mana amantaa Ortodooksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa keessatti aangoo qulqullummaa kan argatan isaan qofadha. Taabotni maqaa isaaniitiin moggafames Salaaletti argama. Abbaa dhugaa ta’uudhan yemmuu warri biyya bulchina jechaa turan guyyaa rakkoo kana uummata gatanii dheessanitti, isaan garuu ummata isaanii waliin du’uu filatan.
Siidaan isaanis Finfinnee Piyaasaa/Birbirsa Goorootti argama, yeroo gabaabaaf sababa misooma daandiitin ka’ee kan ture yoo ta’u Amajjii 29 bara 2008 iddoo isaatti kabajaan deebi’eera.
Maddii oodeefanno: Sagalee Dhugaa Ortoodoksi
Previous Previous post: Oromoota Bu’aa Nuuf Buusan Jajjabeessuu fi Milkeessuun Dirqama Oromummaa Keenya Haa Baanu!
Next Next post: Republican operatives reportedly planning an attack campaign on reporters covering Donald Trump Jr.’s Russia meeting